Tiyaatirri waa’ee seenaa Mootii Abbaa Jifaar lammaffa irratti fuulleffatu guyyaa kaleessaa Yunvarsiitii Jimmaa galma amfii tiyaatiraatti eebbifame - ETHIOPIANS TODAY
Jun 5, 2021 Abbaa Jiraaf II
“Abbaa Jifaar Lammaffoo”
Turtii Artii Tiyaatiraa
Tiyaatirichi Zalaalam Tafarii fi gargartuu qopheessituu Seenaa Abraamiitiin kan barreeffamee fi kan qophaa’ee yoo ta’u barattoota tiyaatiraa waggaa sadaffaa barataniin taasifame (hojjatame).
Leellisaa Fayyisaa muuziqaa qindeessuun barattoonni mana barnoota muuziqaa Alii Birraa immoo muuziqaa meeshaan qindeeffame taphataniiru.
Hooggantoonni olaanoo Yunvarsiitii Jimmaa, keessummoonni affeeramanii fi barattoonni sagantaa eebba tiyaatiricha irratti argamaniiru.
Prieezidaantiin Yunvarsiiitii Jimmaa Doktar Jamaal Abbaa Fiixaa, tiyaatiricha erga daawwatanii booda, tiyaatirichi qabeenya qabnu gadifageenyan laaluun waa hedduu akka hojjachuun danda’amu akkasumas Jimmi biyya seenaa artii tiyaatiraan badhaatuu ta’uushee kan nu hubachiise jedhan. Waan laalaniin hawwatamuun, pireezidaantichi tiyaatirichi akka Oromiyaa fi Itoophiyaa guututti agarsiifamuuf waadaa seenaniiru.
Fuuldurattis kutaaleen barnoota artii hojiilee artii dinqisiisoo danuu nuu dhiyeessuu akka danda’an abdii irraa qabaachuu isaaniis ibsaniiru.
Tiyaatirichi seenaalee dagataman qotee baasuun seenaa fulla’aa dhaloota boriif dabrsuu dabalatee, tiyaatirichi barnootni daree jechaan baratamu akkamitti akka gochaan muldhatu kan caalatti calaqqisiisedha jedhan.
Maddi: Fuula Facebook WDhKM Godina Jimmaa
I will renew my promise to take the Oromo people to a new chapter, President Shimeles Abdissa
Cabinet Members Appointment Mentioned by Shimeles Abdissa, who has been appointed as the head of the state has been approved by Caffee Oromia
The newly formed Caffee Oromia has elected Shimallis Abdiisaa Ulfaataa as the new head of the Oromia National Regional State